Rabada ulibeke ngentla iqela lakhe
KAGISO RABADA ujule ngesantya esiphezulu nangendlela engumangaliso xa ebeka iqela lakhe iStandard Bank Proteas ngentla ngosuku lokuqala kumdlalo vavanyo wesibini weSunfoil eBhayi kwibala iSt George's ngolwesihlanu phakathi kwabo ne Australia.
iProteas kunyanzelekile ziwuphumelele lomdlalo apho bazakuba ntanganye lamaqela kulemidlalo mine kwaye bazakulala bencumile namhlanje ngomsebenzi abawenzileyo wokukhupha iAustralia yonke ngo 243 ngaphakathi kusukulokuqala bona baxhathisa uyokuma ku 39/1 bephulukana nothinti ka Aiden Markram.
iAustralia iyeyaphumelela itoss bakhetha ukuqhokra k'qala kwinkundla ebibukeka ingathi ingalula, chu kakuhle amadoda avulayo uDavid Warner noCameron Banckroft uyokufika ku 98 lamadoda kwaphuma le yakwa Banckroft, yakhona nengqokelela ka 44 eze no Steve Smith noShaun ingalula
Izinto ziyezenzeka waguqula icala ebejula kulo iDuckpond End waza kweli le Park Drive icala izinto zajika ngokhawuleza xa uRabada ekhupha uSmith wayikrazula iAustralia eyedwa. Uzenamanani 5/36 kwi over ezisibhozo esizanabathinti bahlanu kwibhola ezilishumi elinesibhozo ebethwa imitsi elishumi elinesithathu. Belikhona nethuba kulomfo lokuchola ihatrick xa echola uMitchell Marsh noPat Cummins iibhola zilandelelana.
Kokwesibhozo uRabada ezicholela othinti abahlanu kwamangeno kwimidlalo vavanyo engamashumi amabini anesibhozo ayidlalileyo kwaye kokwesibini eyenza edlala ne Australia.
Uncedisiwe ke kodwa lomfo ngabanye, Vernon Philander kwelakhe icala no Lungi Ngidi ongenele uMorne Morkel bazanothinti abahlanu phakathi kwabo.
Kwi session yesibini iProteas zigqibe namanani 5/72 kule yesibini bagqiba namanani 4/73. Eyonanto engahambanga kakuhle namhlanje kweliqela ngamadoda asemsileni kwiAustralia naphinde asokolisa xa bedibanisa u73 phakathi kwabo.
Warner (63 off 100balls, 9 fours) nguye yedwa kwiqela lakhe ugqithe ngapha kwemitsi engamashumi amahlanu.
Rabada ugqibe namanani 5/96 kwi over ezingamashumi amabini ananye, Philander 2/25 kwezakhe ezilishumi elinesibhozo noNgidi 3/51.
Rabanda uphinde wongeza xa exhathisa nje nge night watchman etyunjiweyo waqinisekisa abaphulukani nabanye othinti.
Faf uyazingca ngeqela lakhe nangona bebethiwe Australia phumelele umdlalo wokuqala Maharaj uzikhelele kumdlalo wakhe wokuqala eKingsmead Du Plessis uzakudlala kwidabi abajongenenalo Proteas ne Australia balungiselela elona dabi MORNE MORKEL UZAKUHLALA PHANTSI EMVA KOKHUPISWANO NE AUSTRALIA Australia phumelele umdlalo wamalungiselelo